Air Canada dia manitatra ny tamba-jotra manerantany any Montreal miaraka amin'ny sidina mankany Bucharest sy Lisbon
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Canada dia manitatra ny tamba-jotra manerantany any Montreal miaraka amin'ny sidina mankany Bucharest sy Lisbon
Septambra 28, 2017
Air Canada androany dia nanambara serivisy vaovao tsy misy fiatoana amin'ny toeran-dàlana vaovao roa amin'ny fahavaratra manaraka avy any Montreal, manitatra ny tamba-jotra manerantany mankany Bucharest, Romania ary Lisbon, Portugal.
Ankoatr'izay, manomboka amin'ny volana jona 2018, ny zotram-piaramanidina dia hanatsara ny serivisy mandritra ny taona eo anelanelan'ny Montreal sy Casablanca amin'ny alàlan'ny famindrana ny zotra mankany amin'ny zotram-piaramanidina Air Canada avy amin'ny Air Canada Rouge ary miasa fiaramanidina Airbus A330 manolotra kilasy serivisy telo. Hanitatra ny serivisy vaovao Montreal-Lima Air Canada Rouge manomboka ny desambra 2017 ho an'ny sidina mandavantaona ihany koa izy.
“Ny fanambarana androany dia manamafy kokoa ny toeran'ny Air Canada amin'ny maha-mpitatitra manerantany lehibe indrindra azy. Amin'ireto serivisy vaovao avy any Montreal ireto dia ny Air Canada no hany kaompaniam-piaramanidina amerikana avaratra manidina mankany Romania, tsena eropeana lehibe indrindra tsy misy sidina trans-Atlantika, manamafy ny fisian'ny Air Canada any atsimo atsinanan'i Eropa, ”hoy i Benjamin Smith, filoha, Passenger Airlines ao amin'ny Air Kanada. “Miorina amin'ny fahombiazan'ny Air Canada ankehitriny eo amin'ny tsena Portiogey, ny làlana vaovao Montreal-Lisbon dia manamafy ny fisian'ilay kaompaniam-barotra amin'ny tsena fialamboly fahavaratra avy any Montréal. Ho fanampin'izay, ny fanatsarana ny serivisinay mandritra ny taona any Casablanca sy Lima dia mampiseho ny fanoloran-tenan'ny Air Canada hitombo an'i Montreal ho ivon-toerana lehibe eo amin'ny tambajotranay manerantany. Miaraka, ireo serivisy vaovao sy nohatsaraina ireo dia hanomezana fampiononana sy safidy lehibe ho an'ny mpanjifa, ary koa ny fahaizana mifandray akaiky amin'ny alàlan'ny tamba-jotra amerikana avaratra sy iraisam-pirenena. ”
“Ny fanampiana sy fanitarana ny sidina mivantana nambaran'ny Air Canada dia valiny mazava amin'ny filan'ny mpandeha ary manasongadina indray ny toerana misy an'i Montreal amin'ny maha foibe fitetezana an'habakabaka sy tanàna iraisam-pirenena mitarika azy. Amin'ny fandraisana an-tanana ireo fandraisana andraikitra ireo, ny Air Canada dia tsy vitan'ny fampiroboroboana an'i Montreal erak'izao tontolo izao fa koa fampiroboroboana ny toekarem-pirenena Ireo sidina vaovao ireo dia tsy hanamafy ny fiaraha-miombon'antoka sy ny fifanakalozana amin'ireo firenena nanompoana azy, fa hampitombo ny fahafahan'ny Montreal fitomboana ara-toekarena amin'ny fihaonan-dàlana iraisam-pirenena. Te hiarahaba ny Air Canada aho tamin'ny fandefasana sidina iraisam-pirenena mivantana 20 avy amin'ny tanànantsika ao anatin'ny roa taona latsaka. Tsy afaka nirehareha bebe kokoa izahay, ”hoy ny Ben'ny tanàna Montreal Denis Coderre.
"Amin'ny alàlan'ny fanampiana an'i Lisbon sy Bucharest amin'ny tambajotrany Montreal, ary ny fanolorana serivisy mandritra ny taona any Lima, dia manamafy hatrany ny fikasany hampiasa ny Montréal-Trudeau ho foibe stratejika ary koa ny fanatsarana ny safidin'ny Montreal" , Filoham-pirenena sy CEO an'ny Aéroports de Montréal. "Ny fampivoarana haingana ny serivisy serivisinay dia manasongadina ny toerantsika amin'ny maha foibe fifamoivoizana iraisam-pirenena antsika, miaraka amina toerana fialan-tsasatra sy toeram-pivarotana marobe izay mifanaraka amin'ny fanirian'ireo mpandeha hizaha, ary koa ny fifandraisana mivantana amin'ireo ivon-toerana eken'ny sehatra iraisam-pirenena."
Ny serivisy Bucharest fizaran-tany Air Canada Rouge indroa isan-kerinandro dia manomboka ny 7 Jona 2018 avy any Montréal, miaraka amin'ny hetsika farany avy any Bucharest ny 5 Oktobra. Hanampy azy ireo ny sidina Toronto-Bucharest indroa isan-kerinandro miasa manomboka amin'ny 9 Jona ka hatramin'ny 7 Oktobra. Ny sidina Rouge dia hiasa miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 767-300ER misy ny serivisy Premium Rouge sy Economy. Ny sidina dia omena fotoana hanatsarana ny fifandraisana avy amin'ny tambajotram-pifandraisana Air Canada amin'ny alàlan'ny hub Montreal any Air Canada ary manolotra ny fotoana ahazoana manangona sy manavotra Aeroplan.
Ny fiaingan'ny sidina dia manomboka / mifarana 2018 andro amin'ny herinandro
AC1928 Montreal 17:20 Bucarest 9:15 + 1andro 7 Jona / Oktobra. 4 Alakamisy, Alakamisy
AC1929 Bucharest 11:30 Montreal 14:05 Jona 8 / Oktobra. 5 talata, talata
* Ny sidina Bucharest dia namidy araky ny fankatoavan'ny governemanta.
Ny serivisy serivisy Air Canada Rouge intelo isan-kerinandro dia manomboka ny 15 Jona 2018 avy any Montréal, miaraka amin'ny hetsika farany avy any Lisbonne amin'ny 27 Oktobra. Ny sidina Boeing 767-300ER dia misy ny serivisy Premium Rouge sy Economy Class ary omena fotoana manatsara ny fifandraisana eo amin'ny tamba-jotra Air Canada amin'ny alàlan'ny hub Air Canada any Montreal ary koa ny fotoana ahazoana manangona sy manavotra an'i Aeroplan.
AC1960 Montreal 20:45 Lisbonne 8:10 +1 andro 15 / Oktobra. 26 Alakamisy, Alakamisy, Masoandro
AC1961 Lisbonne 9:45 Montreal 12:10 Jona 16 / Oktobra. Alakamisy, Alakamisy, Sab.
Air Canada dia efa nanambara serivisy iraisam-pirenena vaovao dimy ho an'ny 2018 avy any Montreal. Anisan'izany i Montreal-Tokyo-Narita, Montreal-Dublin. Montreal-Lisbon, Montreal-Bucharest ary Montreal-Phoenix. Ary koa, serivisy vaovao any Vancouver-Melbourne manomboka ny volana desambra 2017, nokasaina ho fizaran-taona, dia hiasa mandritra ny taona hatramin'ny Jona, 2018.
Toerana vaovao tsy miato valo avy any Montreal no natomboka tamin'ny taona 2017: Shanghai (Sina); Marseille (France), Dallas / Ft. Worth (US), Washington / Dulles (US), Keflavik (Islandy), Tel-Aviv (Israel), Algiers (Algeria) ary manomboka ny volana desambra Lima (Peroa).
Air Canada, Air Canada Rouge ary ireo mpiara-miombon'antoka fiaramanidina isam-paritra manidina eo ambanin'ny fanevan'i Air Canada Express dia miasa eo ho eo amin'ny sidina 2,400 87 eo ho eo isan-kerinandro eo anelanelan'ny Montreal sy toerana 24: 20 any Canada, ao anatin'izany ny sivy any Quebec, 26 any Etazonia, 13 any Karaiba , Amerika Afovoany sy Mexico, 2017 any Eropa, iray any Sina, roa any Afrika Avaratra, iray any Moyen Orient, ary manomboka amin'ny Desambra XNUMX ny iray any Amerika atsimo.
Volana moonlando ho toy ny renivohitra fialan-tsasatra Halloween
Ireo mpikarakara ny sidina ao amin'ny Mesa Airlines dia manamafy fifanarahana vaovao